ကြွေးကြော်နေရုံမျှနဲ့ မလုံလောက်နိုင်ပေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြွေးကြော်နေရုံမျှနဲ့ မလုံလောက်နိုင်ပေ
တနေ့မှာ ကျောင်းက အပြန် တက်စီစီးလာရင်း ယာဉ်ကြောကြပ်တဲ့နေရာအရောက်မှာ တက်စီဆရာက ညည်းချင်းစလာပါတယ်။
သူက အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပြီး စင်္ကာပူမှာ (၇)နှစ် အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။မိသားစုနဲ့မခွဲနိုင်လို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းလေးလုပ်ရင်း တဖက်က အပိုဝင်ငွေ ရအောင် တက်စီထွက်မောင်းပါသတဲ့။ ခုလိုယာဉ်ကြောပိတ်တာနဲ့တိုးရင် အုံနာကြေးတောင် မရတော့ပါဘူးလို့ ညည်းပြောလေး ပြောပါတယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျမရဲ့အင်တာဗျူးစပါတော့တယ်။ `စင်္ကာပူမှာ (၇)နှစ်တောင် လုပ်ခဲ့တာ ဒီမှာနဲ့တော့ တော်တော်ကွာမှာပေါ့နော်´လို့ စပေးလိုက်ပါတယ်။ တက်စီဆရာလည်း ရင်ဖွင့်ချင်ချင်ဆိုတော့ ဆက်တိုက် ပြောတော့တာပါပဲ။
“ကွာတာပေါ့ဗျာ ၊ ဆီနဲ့ရေလိုပဲ။ ဒီကိုပြန်ရောက်ရောက်ချင်း လေဆိပ်ထဲရောက်တာနဲ့ တခြားစီပဲ ဆိုတာတွေးလိုက်မိတယ်။ မိသားစုသံယောဇဉ်ကြောင့်မို့လို့သာပေါ့ဗျာ။ ဟိုမှာဆိုရင် အစစအရာရာ စည်းကမ်း ရှိတယ်။ အမှိုက်တစ မတွေ့ရဘူး။ အခုက လေဆိပ်မှာတောင် အမှိုက်တွေတွေ့နေရတယ်။ ဟိုမှာလည်း ဗမာများတဲ့ နေရာတွေဆိုရင် သိပ်မသန့်ချင်ဘူး။ ဗမာဆိုရင် အထင်သေးလို့ လစာလည်း ကောင်းကောင်းမပေးချင်ဘူး။ ကျနော်က သပ်သပ်ရပ်ရပ်လည်း ဝတ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောတတ်တော့ ကျနော့ကိုဆို ဗမာလို့ မထင်ကြဘူး။” လို့ ရင်ဖွင့်ရင်း လမ်းဘေးမှာ ပုံနေတဲ့ အမှိုက်ပုံကို လက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ “ကြည့်ပါလားဗျာ ၊ ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မလဲ။ စည်ပင်ကလည်း မှန်မှန်မသိမ်း ၊ လူတွေကလည်း စည်းကမ်းမဲ့ပစ်”လို့ပြောရင်း ကားတံခါးလေး အသာဟပြီး ပါးစပ်ထဲဝါးနေတဲ့ကွမ်းတံတွေးကို လမ်းပေါ်ထွေးချလိုက်ပါတယ်။
နောက်ခန်းက လိုက်လာတဲ့ကျမ “အင့်” ကနဲ စိတ်ထဲမြည်ရင်း ဓမ္မဗျူဟာစာစောင် အသိအမြင် စင်ကြယ်ရေး ကဏ္ဍ ထဲက ဆောင်းပါးလေး တပုဒ်ကို သတိရလိုက်မိပါတယ်။
၂၀၁၃ခု ၊ ( စက်တင်ဘာ)လ ဓမ္မဗျူဟာ စာစောင်မှာပါတဲ့ အရှင်သုမင်္ဂလသီရိ (ဆင်ပေါင်ဝဲ) ရဲ့ `မုန်းချောင်းကမ်းပါး တစ်နေရာ ´ဆောင်းပါးလေးပါ။ စာရေးသူ ရေးထားတာကို အကျဉ်းချုပ်ရေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုလိုရင်းနဲ့ လွဲခဲ့ရင် ကောက်နှုတ်သူ ကျမရဲ့အပြစ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးအကျဉ်းက ဒီလိုပါ။
မကွေးတိုင်း ကျောင်းတော်ရာ မုန်းချောင်းကမ်းပါး မှာ ဘုရားဖူးငါးကြီးတွေ အစာကြွေးဖို့ စောင့်ရင်း စာရေးသူရဲ့ဘေးမှာ ငါးစာ အတူလာကြွေးတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးက “ဒီနှစ်ငါးကြီးတွေ အလာနည်းသွားတယ်” လို့စကားစလာပါတယ်။
တဆက်တည်းပဲ “ဒီလိုငါးတွေ အလာနည်းလာတာဟာ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ အသုံးမကျလို့ပေါ့ ၊ ဟုတ်တယ်မလား ဘုရား” လို့လည်း ဝေဖန်ရေးအဖော်ညှိလာပါတယ်။
“ဒကာကြီးက ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲ” လို့ စာရေးသူက မေးခွန်းထုတ်လိုက်တော့
“ဇာတ်နိပါတ်ထဲမှာ ရှင်ဘုရင် တပါးဟာ ရသေ့တွေ နေတဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းကို ရောက်သွားတော့ ရသေ့တွေက ချိုနေတဲ့ ညောင်သီးနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ မင်းက မင်းကျင့်တရားနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်တဲ့ အတွက် ညောင်သီးတွေတောင် ချိုနေပါတယ်လို့ ပြောပြတော့ လက်တွေ့စမ်းချင်တဲ့ ဘုရင်က တိုင်းပြည်ပြန် မင်းကျင့်တရားတွေ ဖောက်ပြီး အုပ်ချုပ်ကြည့်ပါတယ်။ နောက်မှ ရသေ့တွေဆီ ပြန်သွားတော့ ညောင်သီးတွေ ခါးနေတာ တွေ့ရမှ ယုံသွားပြီး မင်းကျင့်တရားနဲ့ အညီ ပြန် အုပ်ချုပ်သွားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ အခုလည်း ငါးကြီးတွေ မလာတော့တာ ……….ကြောင့်ပဲ။ ငါးကြီးတွေ ပြန်လာစေချင်ရင် ………လုပ်မှ ဖြစ်မယ်´ လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီလိုဆို ၊ ဒကာကြီးက ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို ပြန်ရောက်ချင်နေတာဘဲ” လို့ ပြန်ဝေဖန်လိုက်တော့ “တပည့်တော်တို့က ပဒေသရာဇ်ဘုရင်စနစ်ကို မလိုချင်ပါဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်လည်း မလိုချင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြစ်အောင် တောင်းဆိုနေတာပါ။” လို့ မကျေမနပ်ပြန်ပြောပါတယ်။
“ဒကာကြီးပဲ စဉ်းစားကြည့်။ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမကောင်းလို့ မိုးလေဝသ မမှန်ဘူးဆိုတာ ဘုရင်စနစ်မှာ လုံးဝမှန်တယ်။ တိုင်းသူပြည်သားဆိုတာ ဘုရင်ရဲ့တချက်လွှတ်အမိန့်ကို လိုက်နာနေရတာ။ တရားသည်ဖြစ်စေ ၊ မတရားသည်ဖြစ်စေ ၊ ဘုရင့်အမိန့်ကနေ ဖီဆန်လို့ မရဘူး။ ဖီဆန်ရင် အသက်သေသွားမှာပေ့ါ။ ဒီလိုနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းစားရေးအတွက် ကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေ ပျောက်ပြီး တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာကို ဘုရင့် လက်ထဲ ၀ကွက်အပ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီလိုအခါမှာ တိုင်းပြည်သာယာဝပြောဘို့အတွက် သီလစောင့်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ တရားမျှတစွာ အုပ်ချုပ်ခံရမှာပေါ့။ ဘုန်းကြီးတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆိုတာလည်း ပဒေသရာဇ်စနစ်အောက်မှာ ထောင်စုနှစ်နီးပါးနေခဲ့ရတော့ ဘုရင်စနစ်ကိုပဲ အရိုးစွဲနေတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေမှာလည်း ဘုရင်၊မင်းသားမင်းသမီး၊ရွှေနန်းတော်ဆိုတာတွေက လွှမ်းမိုးထားတယ်။အဲဒီတော့ ပဒေသရာဇ်စနစ်နဲ့ အခြားစနစ် ယှဉ်လာရင် မသိစိတ်မှာ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ပဒေသရာဇ်စနစ်ကိုပဲ ရွေးမိနေတာပဲ။ တကယ်တော့ ပဒေသရာဇ်စနစ်ဆိုတာ အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်ယပ်ခေါ်နေတာပါပဲ။
ဘုရင်ဆိုတာလည်း ဘုရင့်သွေးဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ မဖြစ်ရင် ဘုရင်သတ်ပြီး နန်းတက်လာတာ။ အခု ဒကာကြီးတို့လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တိုင်းသူပြည်သားက ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်မယ့်သူကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါ့ကြောင့် ရှင်ဘုရင်ဆိုတာ ပြည်သူပြည်သားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရပဲ။ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် ၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင် ၊ မိုးလေဝသမှန်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့က တိုင်းသူပြည်သားတွေ ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ အားလုံးကောင်းမှ တိုင်းပြည်ကောင်းပါမယ်။
မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါးဆိုတာလည်း ၂၁ ရာစုမှာ မင်းသာကျင့်ရမယ့် တရား မရှိတော့ဘူး။
တရားမှန်သမျှ မင်းရော ပြည်သူပါ ကျင့်ရမှာ။
အစိုးရရော ပြည်သူပါ အပြောတူ အလုပ်တူကြဖို့ လိုပါတယ်။ တခုတည်းသော အကျင့်တရားအောက်မှာ အတူရှိနေကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီ အကျင့်တရားကတော့ တရားဥပဒေ ပါပဲ။
ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိရပါဘူး။ဒါကြောင့် မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးဆိုတာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လို့ ဘာသာပြန်ချင်ပါတယ်။
ဒီလိုသာ အစိုးရရော ပြည်သူပါ တရားဥပဒေနဲ့ အညီနေကြမယ်ဆိုရင် ညောင်သီးတွေ ပြန်ချိုသလို ဘုရားဖူးငါးကြီးတွေလည်း ပြန်လာပါလိမ့်မယ်´
ပြောရင်း မဝေးလှတဲ့ အနာဂတ်ကို မှန်းမျှော်မိပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးအတိုင်းပဲ ကျမတို့တတွေလည်း အုပ်ချုပ်သူတွေကိုသာ လက်ညှိုးထိုးမနေပဲ ကိုယ်တိုင်ကောင်းဖို့ ကြိုးစားကြရပါမယ်။
ရေမြောင်းတွေပိတ်လို့ ရေတွေလျှံပြီး လမ်းတွေပိတ် ၊ ညစ်ပတ်တဲ့ ရေတောထဲ လျှောက်နေရရင်၊ကားတွေ သွားမရတော့ရင် စည်ပင်မကောင်းလို့ ၊ အစိုးရက မြေကွက်လပ်တွေ တိုက်ဆောက်ပစ်လို့ နဲ့သာ ဝေဖန်နေကြရင်း
လက်ကလည်း အမှိုက်တွေကို ရေမြောင်းထဲ တွင်တွင်ပစ်နေကြပါတယ်။နောက်ဖေးလမ်းကြားကို မိုးပေါ်က အထုပ်တွေလည်း ကျကျလာတယ်။ကွမ်းတံတွေးတွေ တပျစ်ပျစ်ထွေးကြပါတယ်။
လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားတွေကြပ် ၊ ရှေ့ကိုတိုးမရလို့ အချိန်တွေပုပ်ဖြစ်တိုင်းလည်း အစိုးရက အမြော်အမြင်မရှိ ကားတွေမတရားသွင်း ခွင့်ပြုလို့၊ လမ်းမပြင်လို့၊ မော်တော်ပီကယ် လာဘ်စားပြီး လမ်းမရှင်းလို့နဲ့သာ လေကန်ကြရင်း မောင်းတဲ့ကား ကတော့ လမ်းပြောင်းပြန်၊ လက်ညှိးတချောင်းထောင်ပြီး အတင်းတိုးဝင် ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်လိုက်နေကြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုညံ့တယ်။ ယိုးဒယားမှာ ဘယ်လို၊ စင်္ကာပူမှာ ဘယ်နှယ့်၊ အိန္ဒိယက ဘယ့်နှာ ပြောရင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေကို သိရက်နဲ့စား၊ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်တော့ မလုပ်ချင်ကြဘူး။
ဆရာဝန်ဆရာမတွေ ဆက်ဆံရေးညံ့တာ တော့ ဝေဖန်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ဆေးရုံဆေးခန်းပြရင် အလှည့်ကျော်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
လူတွေဟာ ကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာကိုသာ ရနေကြတာပါ။ ကောင်းတာနဲ့တန်ချင်ရင် ကောင်းအောင် ကိုယ်ကစပြီး နေကြရပါမယ်။
ဒါကတော့ မမဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ရဲ့ FB Status က စာလေးပါ။
It is very interesting to note that people wish forabetter government in Myanmar.
At least we want the government of the people, by the people,for the people ( Abraham Lincoln ).
But people are missing the most important point. Government alone cannot bring up the country that has been deteriorating slowly over many years of mismanagement and abuse.
Without the people’s willingness to participate, there is very little the government can do whether it is NLD or the present regime.
How about starting with cleanliness at home, communities and the country asawhole. To begin with,stop chewing beetle nuts and spitting all over the place. The media should also stop advertising soft drinks which increase the incidence of diabetes and stop drinking hard liquor which contributes to all kinds of liver diseases. Cigarette smoking is another health hazard.This isamuch better way of contributing to your country than antagonizing the government on the streets which oftentimes is futile.
Just remember, without the people’s involvement, the government cannot bring up the country toahigher standard -be it NLD or the present regime.
သန့်ရှင်းသော အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော အုပ်ချုပ်မှုကို လိုချင်ရင် သန့်ရှင်းသော ပြည်သူဖြစ်ရပါမယ်။
သန့်ရှင်းသော ပြီသူဖြစ်ဖို့ ရေကမလာ မီးကပျက်… ကဲကွာ အထူးပါဗူး.. မီးတုတ် မီးတုတ် ရှို့ရှို့…
ပြည်​သူ​တွေရဲ့ မ​ကောင်းတဲ့အပျင့်​​တွေကို ဒဏ်​​ကြေးစနစ်​ Fine​ နဲ့ ​သေ​သေချာချာတိကျကျလုပ်​ရင်​ ​လျော့လာမယ်​လို့ထင်​တယ်​။ ဆရာဝန်​​တွေနဲ့ပတ်​သတ်​လို့က​တော့ ​ပြောရင်​ တီဒုံ စိတ်​ဆိုးဦးမယ်​။တစ်​ချို့​တွေ ၀ါသနာပါလို့ လုပ်​ကြတာ ဟုတ်​ပါ့မလား။ ဂုဏ်​အတွက်​ ​ငွေ​ကြေးအတွက်​ လုပ်​​နေကြသလိုပဲ။ လူ့အသက်​​တွေနဲ့ လက်​​တွေ့ ဆင်း​နေကြသလားပဲ။ နိုင်​ငံ​တော်​ အဆင့်​နဲ့ လုပ်​မှ ​တော်​​တော်​ မြန်​မြန်​သွားမှာပါ။ ပညာ​ရေး။ကျန်းမာ​ရေး။ ဘက ​တွေ အခမဲ့​ဆေးခန်း​တွေရယ်​ NGO ​တွေကိုချည်းပဲ မှီခိုလို့ တစ်​နိုင်​လုံးအတိုင်းအတာထိ မထိ​ရောက်​နိုင်​ဘူးလို့ထင်​ပါတယ်​။ ဘယ်​သူမဆို ​မွေးရပ်​​မြေအစွဲက​လေးရှိ​တော့ ကိုယ့်​​ဒေသကို ဦးစား​ပေးချင်​ကြတာ သဘာဝပါပဲ။
.ဆရာဝန်ဆရာမတွေ ဆက်ဆံရေးညံ့တာ တော့ ဝေဖန်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ဆေးရုံဆေးခန်းပြရင် အလှည့်ကျော်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။´
တီဒုံ စိတ်​မဆိုးပါနဲ့ နည်းနည်းရှင်းပြချင်​လို့
ဆရာဝန်​ကြီးနဲ့​တွေဖို့ ကြိုတင်​ဘွတ်​ကင်​လုပ်​တယ်​။ ပြီး​တော့ အကြာကြီးသွား​စောင့်​တယ်​။ အမှန်​ဆိုရင်​ ညီမ​လေး ၀မ်းကွဲ က အဲ့ဒီမှာ တာဝန်​ခံ ပြီး​တော့ ဆရာဝန်​ကြီး ရဲ့အိမ်​ကို​ဆောက်​​ပေး​နေတာ။ ညီမက​ပြောတယ်​ ​စော​စောဝင်​မလားတဲ့ သူ​ပြော​ပေးမယ်​တဲ့။ ရတယ်​လို့ ငါ့ နံပါတ်​ပဲငါ​စောင့်​ဝင်​မယ်​လို့။ သူ့ကိုဝန်​မပိ​စေချင်​တာရယ်​။ စည်းကမ်းလိုက်​နာချင်​တာရယ်​​ကြောင့်​ပါ။ ​စေတနာ နဲ့ဆူတာကို​တော့လက်​ခံပါတယ်​။ ​ဝေဒနာနဲ့မဆိုင်​တဲ့ ပါစင်​နယ်​​တွေ က ​ရောဂါနဲ့မဆိုင်​ရင်​ မ​မေးသင့်​ဘူးထင်​တယ်​။ ဥပမာ ရန်​ကုန်​က စင်​ကာပူထက်​​ဈေးသက်​သာလို့လာပြတာလား။ ဒီ​ဈေးနဲတန်​တဲ့ ဒီဝန်​​ဆောင်​မှုပဲရမယ်​လို့​တွေ။ အမှန်​က မြန်​မာအချင်းချင်း ​သေ​သေချာချာတိုင်​ပင်​လို့ရမယ်​ဆိုပြီးအားကိုးလာတာ။
အခု အိုင်းရစ်စ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိပ်ပြာလုံတယ်မလား။
အဲသလို လိပ်ပြာလုံဖို့ အဓိကပေါ့။
ရှက်ပါဘူး .. ကျနော် တိုက်ဖိုး ဆန်ဇစ်တစ်ဗတီ နဲ့ သေမလိုဖြစ်နေချိန်
ကျော် ကျော်ခဲ့တာက … သာထိန်းတွေ အပေါ်သွေး ၁၃၀-၄၀ လောက် ဖြစ်လို့…
အထူးကုကိုလာပြ ကြတာ …
တနေ့ သေကြရမည်.. မသေခင် ..အီးပီစီ နဲ့ အမ်ပီတီကို …ခေါင်းဖြတ်ဂျ….
ကားတွေပေါ်မှာ ကွမ်းမစားရ ရေးပြီး ကပ်တာက ကားစပယ်ယာတွေ ယာဉ်လိုင်းက လူတွေ
ကားမှတ်တိုင်မှာ ရပ်နေရင် ကားပေါ်က ကွမ်းတံတွေးထွေးချလို့ စင်မှာကို မနည်းသတိထားနေရတယ်။
လဘ်ပေးလာဘ်ယူ တို့ရန်သူ လို့ စာတန်းတွေကပ်ထားတဲ့ ရုံးတွေလည်း ဘာထူးလဲ။
ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကို ပြည်သူတွေ ကျေနပ်အားရစွာ သုံးဆောင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်း
အခုဆိုရင် ထင်ထားတာထက်ပို တိုးတက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း
တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘူး။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်တွေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကအတိုင်းပဲ
ဆေးဖိုးဝါးခမရှိလို့ မသေသင့်ပဲသေနေသူတွေ ရှိတုန်းပဲ
ဒီမှာက ကြွေးကြော်သံ အသံကောင်းဟစ်သံတွေသာ ညံနေသလိုပဲ
အပြစ် အရှိဆုံးက အဲဒီ ပစ်မလွဲဂျီးတွေမို့
ပြည်သူတွေလည်း အကျင့်မကောင်းတာတွေ့ ကူးကုန်ကြတာနေမှာပါ။
ယနေ့မှ စ ၍
အဓိဌာန်ပြုပါသည် အစ်မတော် ခင်ဗျား…။
ဒီလ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းနဲ့ သဘောတရား.. နည်းနည်းသွားတိုက်ဆိုင်နေတယ်..။
၁၂-လရာသီမိုး ဘွဲ့ထဲက.. နောက်ဆုံးအပိတ်..
ကို ကိုးကားရေးတာ.. အဲဒါစိတ်ထဲအလွတ်မှတ်မိတာ.. ဖြစ်နေတာမို့.. အမှန်ဟုတ်မဟုတ်.. မသေမချာဖြစ်နေတာ..
မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း ၅တွဲရှိတယ်။အဲဒီ မိုးဘွဲ့က ဘယ်သူ ဘယ်ခေတ်ကရေးတာလဲ၊ရှာကြည့်ပေးမယ်။
နောက်က အပိတ်ကို..ကျောင်းအတန်း ပြဌာန်းစာအုပ်မှာပြဌာန်းတုံးဖျြုတ်ထားခဲ့တာလို့.. မှတ်မိတယ်..။
သူ့ များပဲပြောနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ နော့
ဟုတ်ဖူး အဲဒါ . ..ဘာသာရေးကြောင့်
ပေါက်ပင်ဘာ့ကြောင့် ကိုင်းရတယ် ဆိုသလို………….
မှန်လွန်းလို့ ဘာပြောရမယ်တောင်မသိတော့ပါဘူး အန်တီဒုံရယ်။ အရည်အချင်းမပြည့်ဝတဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ ကြောင့် စည်းကမ်းဆိုတာ နားမလည်တော့တဲ့ နိုင်ငံသားတွေကြား မောမိပါတယ်။
. ဆိုခဲ့သလို ပျီသူပျီသါးပျီလိင်တူချစ်သူတွေ ကတော့ စည်းကမ်းရှိကြတာဟုတ်ပါပြီ
. အဲ့သည်ထက်ကိုကျော်ပြီး ပျီသူပျီသါးပျီလိင်တူချစ်သူတွေ က ရွှေလမ်းငွေလမ်းကြီး
. ကြက်ဖွတ်ကဖေါက်ပါတယ်ဆိုပြီး ပဏာဝင်ယူတာတွေကြတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမဒုံးဗျာ
. ဆိုခြင်တာက ပျီသူပျီသါးပျီလိင်တူချစ်သူတွေ က ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ရေမြောင်းကိုယ်ဆယ် ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်ရှင်း လုပ်ကြလို့
. စည်ဘင်က ဘတ်ဂျက်တွေလျှော့ယူမယ်လို့ထင်သလါး??
. ပျီသူပျီသါးပျီလိင်တူချစ်သူတွေ ရဲ့ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်အားတွေကိုပါ
. ဘတ်ဂျက်ထဲထည့်ပြီး သူတို့မိန်းမ ဆပ်စပိုင်တာဘိုးလုပ်ဂျမယ်လို့ ပြောရင်
. ပျီသူပျီသါးပျီလိင်တူချစ်သူများ ကိုယ်ဇလည်
Good Government, Clean Governance တွေကို ကြားရလွန်းလို့ .. (ဖောင်ကြီးသင်တန်းမှာ ….)
ဒေါ်မြလေး လေသံနဲ့ ပြောရရင်တော့ …
ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူး ..
အဲဒီကွမ်းယာ..ဆေးလိပ်…ကာယကံရှင်ရော…ပတ်ဝန်းကျင်ပါ ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ နေရာတကာ.. ၀ယ်ယူစားသုံးခွင့်ရနေတာကို မုန်းတယ်… စားသုံးတဲ့လူတန်းစားတွေကလည်း ရောဂါဖြစ်လာရင် ထိရောက်စွာမကုသနိုင်မယ့်လူတွေက များတယ်.. အဲလိုဆိုင်မျိုးတွေကို အခွန်တွေချပါလား… ကွမ်းယာဆိုင်ကို လေလံဆွဲပြီးမှဖွင့်ခွင့်ပေး.. ကြမ်းခင်းဈေး.. သိန်းတစ်ထောင်…. လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ကျိတာ.. တော်တော်လည်း အသဲယားနေလို့.. .
ကွမ်း၊ဆေးလိပ်၊အရက်(ဘီယာပါ)တွေကိုတော့ အခွန်တိုးမယ်ဆိုပြီး မတိုးတာလည်း မပြောချင်ပေမယ့် ပြောရအုံးမယ် ခွစ်ရေ။
ကိုယ့်ဖာသာရေးပြီး ငါလည်း လေနဲ့ပဲ ကြွေးကြော်ပြစ်တင်နေတဲ့ထဲ ပါများနေပြီလားလို့ ပြန်ပြန်စစ်နေရပါတယ်။
တာဝန်တွေ ကိုယ်စီ ရှိတာ သတိဝင်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဟိုဝံဂီးက ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တောင် ကားနဲ့တက်ဖူးသတဲ့..
အော်… ဘယ်လိုတွေလည်းတော့ မသိတော့ပု..
ဆိုရှယ် လစ် စ နစ် က ဆောင် ပုဒ် ဆို ပေ မယ့် ကောင်း တယ် လို့ ကျ နော် ထင် တဲ့ စာ သားေ လး တစ် ခု ရှိ တယ်
” မိ မိ ကိုယ် ကို ကောင်း အောင် ကြိုး စား မည်” တဲ့။
တစ်ယောက် ချင်း ကောင်း အောင် ကိုယ် တိုင် ကြိုး စား ကြ မှ အားလုံးေ ကာင်း လာ မယ် လို့ ယုံ ကြည်ပါ တယ် ။
အော် နေ လို့ တော့ ဘာ မှ မ ပြီး ဘူးေ နာ်
သူ့ အရပ် နဲ့ သူ့ ဇာတ် က တော့ အဆင်ပြေနေသားဗျ။
စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ အစိုးရ နဲ့ စည်းကမ်း မရှိ တဲ့ ပြည်သူ နဲ့း)
ခက်တာက စည်းကမ်း ရှိချင်ရင်တောင် ကိုယ်က ခံလိုက်ရဦးမှာလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်အမှိုက် ကိုယ် ပြန်သိမ်း။ ကိုယ့်နေရာ နဲ့ ကိုယ် တန်းစီ လောက် က စကြရင်တော့
ငယ်​ငယ်​တုန်းက ရန်​ဖြစ်​​နေတဲ့ သူငယ်​ချင်း နှစ်​​ယောက်​ကြား အသားယူပြီး ​ပြောခဲ့ သလို ပြန်​​ပြောရမဲ့ပုံ ။ ” အကြီး​ကောင်​လဲ ​တော်​ အငယ်​​ကောင်​လဲ​တော်​ ” ဆိုတာမျိုး​လေ ။ ခုလဲ “အစိုးရလဲပြင်​ ပြည်​သူလဲပြင်​ ” လို့​ပြောရမှာပဲ ။ အနိမ့်​ဆုံး အဆင့်​ လူတစ်​ဦးချင်းစီက ပြင်​ရမှာ ။ လူအ​တော်​များများက ပြင်​ပြီး လူတစ်​စုက မပြင်​လို့လဲ မဖြစ်​ပါဘူး ။ အာလုံး ညီညာမှ ပြာသာမှာ ဆိုသလို တစ်​ညီ တစ်​ညာထဲ ပြင်​မှရမှာ ။ ခက်​တာက ဘယ်​​တော့ မှလဲ ညီမှာမဟုတ်​ ။ တစ်​ဖွဲ့လုံးဖြုတ်​ပစ်​မှ နား​အေးမှာ ။ အဲ့ဒိ​တော့မှ ​ခေါင်း​ဆောင်​အသစ်​က ​ရှေ့​ဆောင်​ နွားလား ​ဖြောင့်​​ဖြောင့်​သွားပြရင်​ ​နောက်​က နွား​ပေါက်​စန​တွေ ​ဘေးကို ​ရှော်​​တော မ​ငေါ့ရဲ့ပါဘူး ။ ​ဘေးက နွားကန်​ နဲ့ အသင့်​​စောင့်​​နေသူလဲ ရှိပါ​စေ​ပေါ့ ။ လာဘ်​​တော့မစား​စေနဲ့ ။
အန်တီရေ..အခုက နှမ်းတစ်စေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ အော်နေတာ..
ကိုယ်က ပြုပြင်မယ် စိတ်မကူးဘူး.. သူများ မိုးခါးရေ မသောက်ရင်ကို ရူးနေပြီလို့ ကြည့်ကြတာလေ..
ဥပမာ သမီးဆို တတ်နိုင်သလောက် လူကူးမျဉ်းကြားက ကူးပါတယ်..ဒါပေမယ့် ကားတွေက လုံးဝ ရပ်မပေးဘူး အန်တီရယ်.. မီးပွိုင့်မိနေရင်တောင် မျဉ်းကြားပေါ် တက်ရပ်ထားသေးတယ်… ပွိုင့်ရပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကားကြားထဲကကူးမှ အဆင်ပြေတယ်.. ဒါတောင် လမ်းပြောင်းပြန်တက်လာမယ့်ကားကို ကြည့်ရသေးတယ်.. မဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ်က မျဉ်းကြားရောက်အောင် လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာ မီးပွိုင့်က လွှတ်ရော… ကားတွေက အသားကုန်မောင်း၊ ကိုယ်က နောက်တစ်ပွိုင့်မိလို့ ကားတွေရပ်တဲ့အထိ မျဉ်းကြားမှာ နေပူပူကြီးထဲ မတ်တပ်ရပ်စောင့်နေရတဲ့အဖြစ်.. အဲဒီတော့ လွတ်တဲ့အချိန် လွတ်တဲ့နေရာကနေ ဖြတ်မိရော..
လာမယ်လာမယ်နဲ့ မလာဖြစ်တဲပို့စ်မို့ မန့်နိုင်တုန်းလေး ပြန်ရှာပြီး မန့်လိုက်ပါတယ်
ပြောင်းပါ ပြောင်းပါ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောနေနေ ကိုယ်တိုင်က မပြောင်းရင် မပြောင်းပါဘူး
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင်ပြင်ပြီးမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြုပြင်ဖို့ ပိုလွယ်မှာပါ
တစ်ဖက်ကို လက်ညိုးတစ်ချောင်းထိုးရင် ကိုယ့်ဘက်ကို သုံးချောင်း ပြန်ထိုးထားတာကိုလည်း တွေးသင့်တာပေါ့နော်
ဖြစ်စေချင်တာ လုပ်စေချင်တာတွေရှိရင် ကိုယ်တိုင် အရင်ဆုံး လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း
ဘယ်သူမှ မမေးဘဲ ဝန်ခံသွားပါတယ်ဗျ